Shoko rokuti mukoma (older brother of man or woman; older sister of woman) rinoreva munhu akaberekwa nababa kana amai vako anenge ari mukuru kwauri. Nekumwe kutaura shoko rokuti mukoma rinonyanya kushandiswa kutaura munhu wechirume anenge ari mukuru wauri mumhuri. Kana mukoma ave wechikadzi kunonyanya kushandiswa shoko rokuti sisi kana kuti hanzvadzi.
VaHerero vanoti ou-zamumwe (brotherhood) kureva chibhururu.
VaHerero vanoti ou-zamumwe (brotherly, brotherly manner) kureva chibhururu.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mukoma&oldid=75585"
This page was last edited on 17 Chikumi 2020, at 19:49.